‘एजुकेशन फेयर र छात्रवृत्ति बिद्यार्थीका लागि सुनाैली अबसर ’: अमित पाैडेल/प्रबन्ध निर्देशक फस्ट स्टेप-Nagarikaawaj.com
नागरिक आवाज/बुटवल,चैत्र ।
अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला [एजुकेशन फेयर] गर्ने संस्कार बढ्दै गएको छ ।
बुटवल–९ मिलनचोकस्थित फस्ट स्टेप एजुकेशन कन्सलटेन्सी प्रालिले पनि चैत ९ र १० गते बुटवलमा एजुकेशन फेयर तथा सिइएसटी छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम गर्दै छ ।
फस्ट स्टेप विगत १० वर्षदेखि बुटवलका रहेर विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक परार्मश दिनुका साथै अष्ट्रेलिया, न्यूजल्याण्ड र भारत अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई पठाउँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमको तयारी धमाधम कन्सलटेन्सी धमाधम गरेको छ । नागरिक आवाजले गरेकाे कुराकानीकाे केहि सम्पादीत अंश :
-एकसाथ दुई वटा कार्यक्रम एजुकेशन फेयर र छात्रवृत्ति किन ?
हो,हामीले आउँदो चैत ९ र १० गते अर्थात् [२३ र २४ मार्च] का दिन बुटवलको आम्रपाली कटेजमा एजुकेशन फेयर र प्रदेशमै पहिलो पटक विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं ।
छात्रावृत्ति कार्यक्रम हाम्रो प्रदेश नम्बर पाँचमा नै पहिलो हो । हाम्रो लाभदायी ग्यारेन्टीसहितको छात्रवृत्ति कार्यक्रम हो ।
-छात्रवृत्ति कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले कसरी सहभागी हुने ?
चैत ७ गतेसम्मका लागि फारम वितरण गरेका थियाै । उक्त फारमहरु विभिन्न कलेजहरुमा पनि वितरण गरेका छौं । उक्त फारमको शुल्क हामीले २ सय निर्धारण गरेका छौं ।
जहाँसम्म छात्रवृत्ति परीक्षामा कसरी सहभागी हुने भन्ने कुरामा हामीले १ घण्टाको परीक्षा राखेका छौं । जहाँ ६० वटा वस्तुगत प्रश्नहरू हुन्छन् । उक्त प्रश्नहरूमा रहेर उत्तर दिने हो । जसले सबैभन्दा धेरै उत्तर मिलाउनेछन् । उसले पहिलो छात्रवृत्ति पाउनेछ ।
-छात्रवृत्ति रकम कति–कति राख्नुभएकाे छ ?
पहिलो हुनेलाई १ लाख, द्वितीय हुनेलाई ५० हजार, तृतीयलाई २५ हजार, चाँैथोलाई १५ हजार, ६ देखि १० औं रेङक ल्याउनेलाई १० हजार र ६ देखि ५० रेङक ल्याउनेलाई सहभागीलाई ५ हजार रूपैयाँ दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
सि इ एस् टी छात्रवृत्ति कार्यक्रममा कति विद्यार्थीले भाग हाेलान् ?
अहिलेसम्म ८ सय विद्यार्थीले फारम भरे । २ हजार विद्यार्थीहरू सहभागी हुने हाम्रो अपेक्षा छ । कार्यक्रममा भाग लिन कक्षा ११ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
-एजुकेशन फेयरको उद्देश्यले के हाे ?
विगतमा पनि एजुकेशन फेयर गर्दै आएका छौं । अहिले पनि विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक परार्मश दिन कार्यक्रम गर्ने तयारीमा लागेका छौं । छात्रवृत्ति कार्यक्रम र एजुकेशन फेयर एउटै स्थान आम्रपाली कटेजमा हुनेछ । छात्रवृत्तिमा सहभागी भएपछि विद्यार्थीहरू शैक्षिक परामर्श लिनेछन् ।
-कुन–कुन देशका कति कलेजका प्रतिनिधिहरू आउछन् ?
विशेष गरी अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र भारतमा विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि पठाउँदै आएका छौं । कार्यक्रममा अष्ट्रेलिया, युएसए र भारत गरी ३ वटै देशका गरी २० भन्दा बढी कलेजका प्रतिनिधिहरू आएर विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँको शिक्षा, छात्रावृत्ति, हावापानी र वातावरणदेखि सबै कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराइने छ ।
-स्टल कति रहन्छन् ?
-कति विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश पठाउनुभयो?
-कुन–कुन ठाउँमा शाखा कार्यलयहरू छन् ?
-अन्त्यमा केहि भन्नु छ ?
विद्यार्थीहरू उत्कृष्ट गन्त्व्य शैक्षिक गत्त्व्यमा पु¥याउने हाम्रो मूल उद्देश्यले हो । हामी दुवै कार्यक्रमको तयारी तीव्र गतिमा गरिरहेका छौं । हाम्रो अभियानमा तपाईहरूको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।